Fiaraha-miasa sy fifandraisana | Fiaretana haran-dranomasina
Olana sarotra ny fandotoana ny rano maloto any amin'ny morontsiraka; Ny famolavolana vahaolana sy ny fanentanana fotsiny dia tsy ho ampy hiatrehana io fanamby lehibe eo amin'ny tontolo iainana io fa singa iray lehibe. Noho ny tsy fahitana ny fahalotoan'ny loto sy ny fady mifandraika amin'izany dia mazàna voafetra ny fahazoana ny haben'ny sy ny hamafin'ny fahalotoan'ny besinimaro. Mba hanalefahana ny fahalotoan'ny rano maloto dia mila mijery mihoatra ny fifehezana ny fitantanana ny haran-dranomasina ny mpiaramanidina ary hiara-hiasa amin'ny mpiara-miasa amin'ny sehatra maro, anisan'izany ny fahasalamam-bahoaka sy ny fidiovana ary koa ireo izay mitantana ny tany amoron-tsiraka sy ireo faritra ambony. Ny fandraisana an-tanana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba ho anisan'ny dingana hamantarana sy hamahana ireo fanamby fitantanana rano maloto dia manankery, mitaky fifandraisana mahomby izay mihoatra ny fampahafantarana ny olana mba handrisihana ny tena fanovana ny fitondran-tena.
Misy ny fahafahan'ny mpiasan'ny fiarovana sy ny rano, ny fidiovana ary ny fahadiovana (WASH) hizara ny fahaizany sy hiara-hiasa amin'ny famolavolana vahaolana fanadiovana maharitra izay miaro ny olombelona, ​​ny tontolo iainana ary ny harena voajanahary. Ny mpitantana an-dranomasina dia manana andraikitra amin'ny fampitana ny fahalalany momba ny tontolo iainana anaty ranomasina sy ny fomba manimba azy ireo amin'ny fahalotoan'ny rano maloto. Ilaina io fahatakarana io amin'ny famolavolana vahaolana hiatrehana ny loza mitatao amin'ny fiainana an-dranomasina ary koa ny fahasalaman'ny olombelona. Ny fahitana ny manager sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny sehatra rehetra dia hitondra anjara biriky amin'ny fitaovana fanaraha-maso vonona sy ny paikady hisorohana ny fahasimban'ny ranomasina. Miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe kokoa amin'ny sehatra mampiakatra ny olan'ny fahalotoan'ny rano maloto, ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika dia mety ho voatosika hanohana paikady fanalefahana ny rano maloto. Amin'ny pejy 16-18, Torolàlana ho an'ny mpitsabo iray amin'ny fandotoana rano maloto amin'ny ranomasina manasongadina ireo sehatra lehibe iarahan'ny mpitantana miara-miasa aminy: ny governemanta eo an-toerana sy ny firenena, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria, ny mpanao asa soa, ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka ary maro hafa.
A Fomba fitantanana 'ridge-to-reef' mampifandray ny hetsika fitantanana ny tany amin'ny rano amoron-dranomasina ho an'ny vahaolana mitambatra manerana ny rano sy manerana ny maso ivoho. Matetika manatsara ny fitantanana rano maloto sy mampihena ny fandotoana an-tanety ny tetikasa any an-tampon'ny haran-dranomasina, manome tombony ho an'ny haran-dranomasina, tontolo iainana eto an-tany ary olona. Ny paikady hitazonana ny rano velona - toy ny fampitomboana ny velaran-tany, ny zavamaniry ary ny tany mando, dia mampihena ny fikorianan'ny loto ao anaty ranomasina. Ny fisamborana rano maloto rehefa mihetsika midina izy dia mampitombo ny fiatraikany amin'ny fomba fitsaboana mampihena ny habetsahan'ny loto mandoto ny tontolo iainana an-dranomasina.
Ny fomba fiasa mifangaro izay mampifandray ny hetsika fiarovana amin'ny rano dia manome tombony ny haran-dranomasina. Sary © Jordan Robins / Fifaninanana sary TNC 2019
Fiaraha-miasa lehibe iray hafa dia ao anatin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Ny fandraisana an-tanana ireo mpandray anjara ao an-toerana ho ampahany amin'ny fizotrany hamantarana ireo fanamby fitantanana rano maloto ary hametraka vahaolana dia manampy azy ireo hahita ny olana voalohany ary hanompo amin'ny maha tompon-daka azy ireo hampita ny voka-pikarohana sy hananganana fanohanana sy fandraisana anjara amin'ny vahaolana. Izy io koa dia manome ny mpitantana sy ny mpahay siansa tena ilaina fanohanana eny ifotony ary afaka manamora ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite, ONG, masoivohom-panjakana ary mpikaroka eo an-toerana. Jereo ity fanadihadiana tranga momba ny famoronana ny Asa 4 Rano, mpiara-miombon'antoka mpiara-miasa novolavolaina hamorona asa sy hiatrehana ny fahalotoan'ny rano maloto amin'ny alàlan'ny fanafainganana ny fanoloana cesspools ao amin'ny State of Hawaii.
Manerana an'izao tontolo izao dia mirotsaka an-tsehatra ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana misokatra amin'ny varavarankely vaovaofanaraha-maso ny kalitaon'ny rano hiarovana ny morontsirak'izy ireo. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFondation Surfrider ary Hui O Ka Wai Ola dia ohatra roa amin'ny programa fanaraha-maso kalitaon'ny rano siantifika olom-pirenena. Ny angon-drakitra momba ny kalitaon'ny rano eo an-toerana dia manome porofo mivaingana momba ny toerana misy ny loto amin'ny rano maloto. Ity fampahalalana ity dia azo ampiasaina hamantarana ny loharanon'ny fandotoana rano maloto ary hiara-miasa amin'ireo mpandrafitra eo an-toerana na tompon'andraikitra amin'ny governemanta hamantatra ireo vahaolana politika.
Fiofanana mpilatsaka an-tsitrapo an'ny Hui O Ka Wai Ola. Sary © Bruce Forrester
Ny safidin'ny teknolojia sy ny fomba fampiharana dia nifantoka ara-tantara tamin'ny fanangonana fako, fikojakojana ary fitsaboana. Na izany aza, ny vahaolana ara-pahasalamana mahomby sy maharitra dia mitaky fahatakarana ny vondrom-piarahamonina notompoina, manomboka amin'ny fomba fitondran-tena, hatramin'ny fahazoana loharanon-karena, hatramin'ny fanekena kolontsaina. Tsy misy vahaolana tokana; ny vahaolana fanadiovana dia mila ampifanarahana amin'ny isam-pokontany.
Ny fady efa lava hatry ny ela ny fako dia mametraka fanamby manokana amin'ny fampitana hevitra momba an'io lohahevitra io. Ny fandaniana fotoana hahatakarana ireo fady sy izay eritreretin'ny mpihaino momba ny fako sy ny fanafoanana ary ny fitantanana ny fako dia zava-dehibe amin'ny famolavolana vahaolana mahomby sy paikady fampiharana izany. Afaka manampy amin'izany ny fikarohana siansa sosialy sy ny fizotran'ny fifandraisana stratejika.
Ny fanamby manaraka dia ny fananganana fanohanana na fandraisana anjara amin'ny fampiharana ny vahaolana fanadiovana. Mba hahatratrarana izany, ny mpitantana dia afaka manomboka amin'ny famantarana hoe iza no handresy lahatra na handrisika handray andraikitra. Ohatra, ny programa fanesorana cesspool dia mety ahitana mpihaino roa lehibe: 1) mpanao politika eo an-toerana izay mila mizara vola ho an'ny fanesorana cesspool; ary 2) tompona trano amoron-dranomasina izay mila mangataka programa rebate mba hividianana cesspools. Ny fanentanana ny olona hanao zavatra dia tsy tonga haingana ary mitaky fandaminana am-pitandremana sy fifandraisana stratejika.
The Fifandraisana stratejika ho an'ny fiarovana torolàlana ho an'ny mpitantana an-dranomasina dia manasongadina dingana iray amin'ny dingana fandrindrana mba hanampiana hamantatra ny tanjon'ny fifandraisana sy hamolavola paikady hahatratrarana azy. Ireo dingana fito voalaza etsy ambany dia mitarika ireo mpampiasa amin'ny famoronana sy fanatanterahana drafi-pifandraisana. Ny ohatra sy ny takelaka ho an'ny dingana tsirairay dia manazava ny fifandraisana sy mifampiresaka. Ho an'ny fandotoana rano maloto, ny famotopotorana ny olana momba ny olana amin'ny faritra iray dia fanombohana lehibe hametrahana fanamby eo an-toerana sy hamantarana ny tanjona sahaza azy. Ny data sy statistikan momba ny olana, ny fahazoana ny laharam-pahamehana amin'ny mpihaino, ary ny fahatsiarovan-tena momba ny fisian'ny loharano dia hanatsara ny maha-zava-dehibe an'io fomba io.
Zahao ny torolàlana momba ny ohatra amin'ny tetika fifampiresahana mba hisarika ny sain'ny mpihaino kendrenao ary handrisika azy ireo hanao zavatra. Maro amin'ireo hevitra nozaraina dia mihatra mivantana amin'ny fanalefahana ny ezaka fandotoana rano maloto. Tetika iray momba ny fifandraisana tsy tafiditra ao amin'ilay torolàlana izay misy ifandraisany amin'ity lohahevitra ity, dia ny fampiasana angona mba hisarihana ny saina amin'ny fahalotoan'ny rano maloto. Ohatra iray amin'izany ny fitaovana fanaovana sary amin'ny angon-drakitra avy amin'ny Pacific Islands Ocean Observation System (PacIOOS) izay ahafahan'ny mpitsabo mampifandray ireo fepetra amin'ny kalitaon'ny rano amin'ny fari-dranomasina sy ny fandinihana kalitao rehefa mandeha ny fotoana. Ny fitaovana dia mampiseho an-dàlana ireo data ireo sy ny fikarohana momba ny toe-dranomasina, ary azo ampiasaina ho maodely ho an'ny siansa data sy fanaraha-maso ny ranomasina any an-kafa. ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPoints Tipping Ocean fitaovana dia maneho an-dàlana ireo data ireo sy ny fikarohana momba ny toe-dranomasina, ary azo ampiasaina ho maodely ho an'ny siansa data sy fanaraha-maso ny ranomasina any an-kafa.
Tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra (SDGs)
Mba hampitomboana ny fanohanana sy ny enti-miasa amin'ny fanalefahana ny rano maloto amin'ny rano maloto avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta, ny mpanao politika, ary ny mpihaino hafa avo lenta, ny paikadim-pifandraisana mahomby dia mety hampiharihary ny fomba ifandraisan'ny fahalotoan'ny rano maloto any an-dranomasina sy anohanana ny tanjon'ny Firenena Mikambana (ONU) fampandrosoana maharitra (SDG) ).
SDGs (noforonin'ny Firenena Mikambana tamin'ny 2015) dia manatratra tanjona kendrena amin'ny fanomezana zon'olombelona sy fiarovana ireo loharanon-karena manerantany. Ao anatin'ny SDG dia misy tanjona manokana sy tanjona kendrena ho an'ny fidiovana (SDG 6.3) sy ny fiarovana ny ranomasina (SDG 14). Na izany aza, misy ny fifandraisana misy eo amin'ny fanamby sy ny fiantraikan'ny fahalotoan'ny rano maloto any an-dranomasina sy ny tanjona 17 rehetra (jereo SDG etsy ambany).
Tanjona fampandrosoana maharitra 17 an'ny Firenena Mikambana, izay natsangana tamin'ny 2015 ho an'ny zava-bita tamin'ny 2030. Source: United Nations
Natokana ho an'ny hetsika mifandraika amin'ireto tanjona manerantany ireto ny loharanom-pahalalana manan-danja eo amin'ny sehatra eo an-toerana, nasionaly ary manerantany. Fahafahana manalefaka ny fahalotoan'ny rano maloto sy mandroso mialoha mankany amin'ny SDG dia misy amin'ny fitantanana ny jono hiarovana ny sakafo mahavelona sy fivelomana (SDG 2 sy SDG 8); foto-drafitr'asa fanadiovana maharitra (SDGs 9 sy 10); ny fiarovana ny toetrandro sy ny tontolo iainana (SDGs 13, 14, 15); ary ny vahaolana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana, ny fahasalamana, ny teknika ary ny fepetra ara-tsosialy (SDG 16 sy 17). Ny fitazonana ireo tanjona kendrena ao an-tsaina dia afaka manampy amin'ny fametrahana tranga iray hanohanan'ny mpanao politika paikady fanalefahana ny rano maloto.
Tsindrio ilay sary etsy ambony raha te hiditra amin'ilay mpitari-dalana
Africa Biodiversity Collaborative Group (ABCG), izay misy ny IRC, Conservation International, ary ny Jane Goodall Institute, dia namorona misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiarovana ny rano velona sy ny torolàlana ho an'ny mpanentana amin'ny paikady fanatanjahan-tena WASH Advocacy. Ity torolàlana ity dia manomana mpikarakara hitarika atrikasa izay manome fahatakarana ifotony momba ny filàna WASH sy ny fiarovana ny rano tafiditra ao anaty ary manolotra paikady hiarahana amin'ireo mpanapa-kevitra hamorona ny fanovana politika. Ny tanjon'ity torolàlana sy atrikasa ity dia ny hampahafantatra sy hanome aingam-panahy ny fisoloana vava amin'ny vondrom-piarahamonina hanohana ny fandaharan'asa politika hampiroboroboana ny vahaolana WASH sy ny fiarovana ny rano.
Na dia mikendry manokana hiarovana ny loharanom-pahalalana rano aza ny Tari-dalan'ny ABCG, ny fomba naroso dia mihatra amin'ny faritry ny ranomasina. Ilay atrikasa sy fitaovana atolotra azy mandritra ny efatra andro dia ohatra iray azo ampifanarahana sy araraotin'ny fiarahamonina amoron-tsiraka.
Fifandraisana stratejika ho an'ny fitahirizana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAlliance madiodio maharitra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVondron'olom-piaraha-miasa biodiversité Africa
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIRC
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoConservation International
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoJane Goodall Institute